Burma Partnership » Weekly Political Events Regarding the SPDC’s Election (021-2010)
By Network for Democracy and Development • June 20, 2010
U Tin Oo, the Vice-Chairperson of NLD, stated that NLD leaders, inameeting held at the NLD headquarters in Shwegondine, decided to extend NLD’s social activities from current projects, such as, supporting political prisoners and family members, nursing HIV/AIDS patients and legal support, to raising awareness about the issues of child soldiers conscription, forced labor and forced land confiscations.
Amnesty International (AI) announced on 18 June that AI would distribute radios in Burma for people in Burma to be able to access true, independent and reliable news.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေဖြင့် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် မိသားစုဝင်များကို ကူညီထောက်ပံ့ရေ၊ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်များကို ပြုစုကုသရေး၊ ဥပဒေအထောက်အကူ ပြု လုပ်ငန်းများအပြင် ကလေးစစ်သားစုဆောင်းခံရမှု၊ အဓိမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများနှင့် အဓမ္မမြေယာ အသိမ်းခံရမှု ပပျောက်ရေး စသည့် လုပ်ငန်းများကိုလည်း တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေဂုံတိုင်ရုံးချုပ်တွင် NLD ခေါင်းဆောင်များမှဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ လွတ်လပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် အမှန်တရားများကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (Amnesty Internaltional –AI) က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေဒီယိုများ ဖြန့်ဝေမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။